"एक बांध्नु बिना": इतिहास, अर्थ र उपयोग उदाहरणहरु phraseologism
"एक बांध्नु बिना" (वा "कुनै गाँठ, कुनै बांध्नु") मान्छे कुनै दोष नभएको कार्यान्वयन व्यवसायको बारेमा भनिरहेका छन्। आज मान, इतिहास, पर्यायवाची र उपयोग उदाहरणहरु phraseologism विश्लेषण।
यो अवधि पुरातन समयका एक रूख मा लगे थियो ती हामीलाई गर्न आएको छ कि स्पष्ट छ। र यस्तो मास्टर पूर्ण उपचार काठ देख, भन्नुभयो: "हो, सौन्दर्य - एक बांध्नु बिना।" अर्को शब्दमा, कुनै अनियमितताहरु र खुरदरापन हो भनेर पक्का गर्न। विशुद्ध गरे। आखिर, प्रत्येक बोर्ड अघि, मास्टर को हातमा पहिले, एक रूख थियो, त्यसैले कारीगरों को कार्य - यसको मूल लुकाउन भनेर कला काम सिर्जना गर्न।
जो अभिव्यक्ति को मूल, तर मिडिया र रूसी भाषा गरे अर्थमा को ज्ञान सम्झना अब एकदम केहि। "एक बांध्नु बिना" - कमीकमजोरी पत्ता लगाउन कठिन छ जो अन्तस्करण मा गरेको काम हो। वा बरु, कुनै कुरा कसरी हेर्न, तपाईँले फेला हुनेछ।
रूसी भाषा र वाक्पद्घति
तर खुरदरापन मात्र रूख मा, तिनीहरूले जताततै छौं। उदाहरणको लागि, पाठ। त्यहाँ राम्रो-लिखित पदहरू खराब छौं। विभिन्न व्यक्ति र विभिन्न शैलीहरू छन्। उदाहरणका लागि, टोलस्टोय र Bulgakov फरक लेखे। तर पाठ हुनत आपसमा सदृश छैन, अझै पनि चिल्लो छ। को अल्पविराम त्यहाँ राखिएका छन् - तर सम्पादक कुनै न कुनै पाठ के थाह वर्तनी त्रुटिहरु। "एक बांध्नु बिना: संपादक बारेमा एउटा पाठ भन्दै ताकि गराउँछ! संपादक को उल्लेखनीय काम। " कहिलेकाहीं, को पाठ्यक्रम, आफ्नो भताभुंग पार्छ को सम्पादक, तर हामी यस्तो दुःखी मामला विचार छैन।
काठ उपचार र समय परियोजना हस्तान्तरण
यो शब्द "परियोजना" प्रयोग गर्न फैशन छ। तर "परियोजना" - अमूर्त कुरा हो, तर यो पनि shamelessly "एक बांध्नु बिना" लागू हुन सक्छ। यो विश्वव्यापी छ वाक्पद्घति।
आफ्नो पुर्खाहरूको पैतृक - रूसी राष्ट्रिय चरित्र मानिसहरूलाई हामी अन्तिम मिनेट मा सबै गरिरहेका छन् भन्ने छ। हाम्रा पुर्खाहरूले यस न्यानो महिनामा काम र चिसो केही गरे, त्यसैले दुई लाइनहरु गठन रूसी वर्ण - शानदार र विश्वास नलाग्दो कठिन काम आलस्य।
तर अब रूसी वर्ण जर्मन meticulousness penetrated र अब देखि सबै परियोजनाहरू समय र सही हालत हुनेछ भनेर कल्पना गर्नुहोस्। पनि केही भाग्यमानी मालिक भनेर कल्पना गर्नुहोस्, र उहाँले एक चमत्कार हेर्दै गर्नुपर्छ। यो कसरी टिप्पणी गर्ने? खडा जो प्राकृतिक अभिव्यक्ति,: माथि disclosed मूल्य phraseologism "एक बांध्नु बिना", यो मुद्दा फिर्ता छैन।
Phrasebook पर्यायवाचीशब्दप्रविष्टगर्नुहोस् - "लामखुट्टे नाक कमजोर छैन"
अभिव्यक्ति को मूल मा विभिन्न भन्छन्। त्यहाँ watchmakers देखि गए एक सिद्धान्त छ। मास्टर अन्तस्करणले मा काम भने, त्यसपछि संयन्त्र सबै भागहरु त सँगै पनि एक लामखुट्टे त्यहाँ आफ्नो नाक छडी छैन सक्ने सज्जित छन्। यस्तो hypotheses को बुनकर सम्बन्धित छन्। कुरा ठीक त पनि एक लामखुट्टे एक दोष फेला हुनेछ अनुकूल।
यसलाई निम्नानुसार, उदाहरणका लागि, यो विचार विकास र प्राकृतिक analogy सोच्न सम्भव छ: लामखुट्टे क्षति (वा तिनीहरूले, पुरानो दिनमा भन्न रूपमा "तिखार्ने") असुरक्षित ठाउँमा। एक व्यक्ति पूर्ण आफ्नो शरीर सुरक्षित छ भने, bloodsuckers घुमफिर गर्न कतै छ।
तर तपाईं "एक बांध्नु बिना" को दिगो वाक्यांश प्रतिस्थापन गर्न एक सरल अभिव्यक्ति पाउन सक्नुहुन्छ। पर्यायवाचीशब्द एकदम बस टिप्न। यो एक क्रियाविशेषण हुन सक्छ:
हामी विशेषण प्रयोग गरेर भन्न सक्नुहुन्छ:
यो महत्त्वपूर्ण सबै उपाय वा कुराहरू छ।
रचना र वाक्पद्घति-पर्यायवाचीशब्दप्रविष्टगर्नुहोस्
राम्रो निबंध लेखिएको छ जो एक विद्यार्थी कल्पना गर्नुहोस्। यसलाई शिक्षक प्रशंसा र यहाँ त्यो पखेटा मा घर गुजर। त्यहाँ उसले एउटा कडी बुबा पूरा र सोध्छन्:
- ठीक छ, घाटे वाला, जस्तै लिख?
- बुबा, म ठीक छु, लामखुट्टे नाक कमजोर छैन!
- थप विशेष?
- यो "5" को मूल्यांकन। शिक्षक मलाई धेरै प्रशंसा गरे।
- त्यो राम्रो समाचार हो।
"काठ" खेल रूपकहरुको र भेरिएसनहरूमा phraseologism
टिप्पणीकारहरू अक्सर हास्यास्पद कुरा भन्न, तर किनकी, unenlightened दर्शक तिनीहरूले स्मार्ट छैनन्, तर सोच्छ रूपमा खेल घटनाको तीव्रता यस्तो छ किनभने तपाईं पनि चिरपरिचित शब्दहरू भूल छ। र umnosti र भावना को भट्टीमा पहिलो मर सुन्दर।
तर कहिले काँही खेल को प्रसारण पनि एक phraseological को अर्थ जान्न चाहन्छु गर्नेहरूका लागि उपयोगी हुन सक्छ भन्ने कुरा भन्न साथ दिनु "कुनै गाँठ, कुनै बांध्नु।" सोही तीन उत्पन्न कि अभिव्यक्तिमा भेरिएसनहरूमा:
न त bitch न त एक बांध्नु।
एक बांध्नु, एक बांध्नु बिना बिना।
एक बांध्नु बिना।
सबै तीन विकल्प बराबर छन्।
को टिप्पणीकारहरू फर्केपछि। आज, तिनीहरूले अक्सर क्रिया "sawed" प्रयोग गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि: "मेसीले एक साझेदार सिद्ध प्रसारण sawed।" यो प्रस्ताव मा मेसीले भन्दा हामी टोली खेल मा लगे कुनै पनि खेलाडी को नाम विकल्प गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ मान्छे बीच त्यहाँ पूर्ण-समय टकराव, केही तपाईं "यसलाई कटौती" गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीको भन्दा राम्रो। र पाठ्यक्रम, एक असामान्य अर्थमा सामान्य क्रिया, विषय अभिव्यक्ति बुझाउँछ। आपत्ति प्रत्याशा, यस्तो: यो काठ को एक टुक्रा, तर मिसिन को फलाम भाग मात्र होइन देखे गर्न सम्भव छ। साँच्चै, यस्तो संघ सम्भव छ, तर केवल कारखानों र proletarians यसको पंथ संग, सोभियत अवधि फेला गर्नेहरूका लागि। जो जहाँ विगतका रोमान्स लगभग भूल एक वास्तविकता मा वृद्धि आधुनिक जवान मान्छे को लागि, शब्द "sawed" संधै एक "काठ" सम्बद्धता कारण हुनेछ।
श्रम को कुनै पनि वाक्पद्घति संग, "एक बांध्नु बिना" वाक्यांश को गम्भीर काम मानिस सेट र implies: कुनै पनि काम excruciatingly को बर्बाद खर्च समयको लागि पीडादायी थियो कि एक स्तरमा गरेको हुनुपर्छ। को लामखुट्टे नाक कमजोर हुनेछ भनेर कुनै काम गर्नै पर्छ - सबै समय मा बोर्ड, हरेक व्यक्ति र मान्छे को हरेक पुस्ता यस्तो सिफारिस आवश्यक छ। हामीलाई यो बेवास्ता गर्न दिनुहोस्, र कृतज्ञ भई स्वीकार्न।
को ल्याउनुभयो के हो? साहित्यिक भाषा र ल्याउनुभयो बोली,
मा रूसी भाषा सधैं कठिन consonants
"पक्का लागि": मूल्य phraseologism र उपयोग को उदाहरण
कुन के हो? विस्तृत विश्लेषण
एक फरक दृष्टिकोणबाट उचित नाम के हो?
कसरी उनको टाउको मा एक bandana बाँध गर्न - थाहा चोट छैन
मोजा कसरी लगाउन: सुझावहरू
Beeswax को औषधीय गुण। Beeswax: समीक्षा, मूल्य
उहाँले पैसा आकर्षित गर्न शुभंकर के हो?
बर्ककोटोस्टानको नदीहरू अध्ययन गर्दै
भ्रूण डपलर - हरेक expectant आमा को लागि एक अपरिहार्य उपकरण
Antiparasitic एजेन्ट "Bravekto": समीक्षा र संरचना
Mandragora officinarum: गुणहरू, contraindications, फोटो